Dargagoon Oromoo Qabsoo Bilisummaaf Qoophi ta’uu keenya Mirkaneesine jira
Haali Hanga amma dargagoota Oromoo burjajeessa ture ilee, dhalooti haaraan bilisummaa barbaduu gaafi uummataa Oromoo deebi xuumura itti keenuuf murte isaa murteefatee jira. Haali waggoota darban fi ji’oota darban turan jijiramee gara haala nama gamachisuutti jijjirama jira. Ilmaan Tigray Uummataa Oromoo Suura Melese dura nana’ani akka boo’aan gochuun isaa tuffi saba keenyaf qaban ta’uu isaa kan mirkaneefatee uummatni Oromoo Bilisummaa isaa labasachuuf qoophii isaa yoomi irra iyuu cimee jira.
Ibsa fi yaadaa UN, USA, EU du’aa Melese Zenawi ilaalchisan kenaa jiran, feedhii dantaa isaan malee fedhii uummataa cunqurfamee foyeesuuf kan yadamee mitti. Gochaa Mootummaa Abba Iirree Melese Zenawi Uummataa keenya irratti rawwatee ilee kan ibsuu mitti. Kun ammoo Uummataa fi dargagoo biyyatti Qabsoo bilisummaaf akka kakase beekamadha, dhaabilee siyaasaa Oromoo bayee garuu amma ilee feedhi uummaticha fi rakkoo uummataa isaan kan hubatan hin fakatuu, utuu ta’ee haala duree tokko malee uummataa isaan jeecha wal ta’aan ka’uun amma ture.
Siirna duloomaa, Siyaasaa dulooma, ilaalcha duloomaa, bilisuummaa Oromoofi guufuu ta’uu hunda irra maqee kara shafisaan (arifaachisaan ) isaa adeemsisuu dargagoon Oromoo filate deemuu egale jira. Wal dura dhabachuuf fi guufuu waltti ta’uu warii addaa godhatan ta’aan afaan fajji uummuu irra of quusatan qabsoo haqaa biyya galchuun furmata ta’e jira. Dargagoon Oromoo university hunda keessa jiru tokko ta’a jeedhe utuu jarsooli keenya goorsuu yeroo itti darbuu isaa hubatani hojii qabsoo irratti booba’ani jiru. lamuu boodeetti deebi’uun hin jiru.
TPLF angoo irra turuuf yamuu waan hunda gochaa jiru fi Habasha dulooman ilee sirrna Minilik deebsuuf yaamuu dibee ruktuu kana OPDOn uummataa Oromoo biraa jiruu ilee unni hoo malii uummataa milliona 50 qabane atamiin tufatamnee gaafii jeeduu gaafachuu dhisaan ammalee Tigreef ergamuuf of qoopheesun isaan Uummataa Oromoo guutuun dargagoo Oromoo hunda Misensoota OPDO dabalate akka abida isaan guguba jira. Yamuu Wayaneen uummata keenya Ganda hundatti yaaftee dirqaman boosiftuu Oogannoon OPDO dura dhabatan bo’uun ofi salphatan Oromoo salfachisaa jiru. Kuna ammoo dargagoo Oromoo caalaatuu gara hammeese jira.
Immimaan Oromoo dirqamaan dhangala’e fi dhiigii qabsa’oota booba’aa ta’e jira, lafeen ijoolee Oromoo lubu isaan dhaban ammoo qooran ta’e jira. Dargagoon Oromoo booba’aa qoopha’ee fi lafe Oromoo qooran ta’eetti abida itti ka’uun diina gubuuf qoophii xumuranee jira. Uummaatii Oromoo fi Dhaabileen Oromoo murannoo qabdan lafa Oromoo irratti falmii geggesuuf nu birra dhabadha jena. Waanuma feedhe ta’aa malee Tigree Milliooni 3 Oromoo Milliona 50 lamaffaa hin bulchituu siirna Minilik warii deebsuuf yaalan fi jala adeemtuu isaan awwalcha isaan isaa xuumraa irratti Bilisummaa Oromoo labasuuf qoophi ta’uu keenya wara of shakitan hundaaf dhamuu feena.
Bilisummaan Uummataa Oromoo goonfachisuun gaafii fi feedhii Oromoo tartiban hojii irra olchuuf qoophii qabna:
Hidhamtoon Oromoo 40,000 guyyaa Bilisummaa Gadii dhifamani saganta isaan itti dandamachiifnuuf gootoota Oromoo ta’uun muudamuu isaan mirkaneesuuf hojii isaa dura ta’aa,
Baqatoon Oromoo 120,000 Gaanfaa Afrikatii fi biyya Arabatii, fi biyyota birootti rakkacha jiran walumagalatti baqatoon Oromoo 500,000 ta’an Qabsa’oon, Hayuuleen, Aritistoon, Gazeexeestoon Oromoo kabajan biyya isaantti deebsaani ijaruun kayyoo keenya,
Seerii fi Heerii Oromoo salphisee aadda fi afaan Oromoo dhokkisee seerii habashaa hundi molqamee seerii fi heerii Oromoo abba biyya godhuuf kabaja Oromoo deebsuu hayuu Oromootiin qoopha’ee siirna gadaan midhagee hojii iraa ola,
Oromoon siirna habashaan lafti isaa fi qabeenyan isaa samame addabii isaa waliin deebsuufi mirga Oromootti malee hayyama hin gaafanuu,
Mirgii Amantaa hundi Waaqeefana Oromoo dabalatee kabajaan kan egamu ta’a,
Afaan Oromoo Afaan Hojii biyyatti ta’uun fi Finfinneen Magaala guddtti Oromiyya ta’uun labsii isaa dura ta’aa.
Waraani waan Oromoo ta’e qoofafi hidhamee hojii irraa ari’amee fi Qabsoo bilisummaa keessatti waggotaa dheeraaf barrumsa fi mudama tokko malee bilisummaaf kan lolee barrumsa amayya argatee humna nagaa fi tasgabii Gaanfa Afrkatti fiduu ta’ee ijjarama,
Shamaran fi dargagoon Oromoo biyya Arabatti akka meeshatti gurguraman guyya guyyan lubun isaan dabrituu biyya isaantti galan jireenyi isaan akka jijjiramuu ta’a,
Yaakamtoon seeratti dhiyaatan akka adabii isaan fudhatan gochuu,
Misoomma soba utuu hin tane misoomma dhugaa mirkaneesuu.
Qabxiilee kana oltti caqasaman fi kan haffan feedhii fi gaafii uummataa Oromoo hunda rawwachuu irraa waanti nu dhorkuu takumaa jirachhuu hin qabuu jirate ilee fudhatamaa hin qabuu.
Gummi Paarlamaa Oromoo fi Gurmuu Dhaloota Haaraa Warraaqsa Bilisummaa Oromoo
Oromiyyan ni Bilisoomtii!!